Mutemo weVashandi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mutemo webasa
Ndeipi nzira yemugwagwa mune zveutano uye ndiani anoripa?
Ndeipi nzira yekuchengetedza hutano uye ndiani anobhadharirwa iyo? Hurumende yakabvumidza gwara remugwagwa rekuchinja kwakagadzirwa nebazi rezvehutano kwehurongwa hwekuchengetedza hutano hweRussia mumakore matanhatu anotevera. Iyo nzira yemugwagwa inotsanangura ...
Ndeipi inofanira kuva yega mushure mekushanduka kweusiku? Uye maererano neshoko ripi?
Chii chinofanirwa kuve Zororo mushure mekushanduka kwehusiku? Uye zvinoenderana nenyaya ipi? Kune kungorambidzwa kumwechete kwekuchinja kwehusiku - iko kuchinja kwehusiku kunofanirwa kunge kuri 1 awa mupfupi pane ...
Ndiani anofungidzirwa ari mucheche wechidiki mune dzidzo?
Ndiani anonzi mudiki nyanzvi mune dzidzo? ane ruzivo kubva pa1 kusvika pamakore 3. Nyanzvi yapfuura yakatsanangura pfungwa yeyanyanzvi wechidiki. Chero chakakosha mabhenefiti kune vechidiki nyanzvi mune ino system ...
Ko mushandi webazi revashandi
Chii chinoitwa nemushandi weDhipatimendi reHR anoita makumi matatu emabasa ... ndezvechokwadi here ??? inoenderana here nehupenyu ?? chinotyisa ... vashandi vanopatsanurwa nevashandi HR NYANZVI Mabasa mabasa. Inoita basa rekushandira sangano nevashandi ...
Mitero yepamusoro inotorwa here?
Maprimiyamu ari kubvisirwa mutero? Rubatsiro rwezvinhu chete harusi pasi pemutero wemari, zvimwe zvese mubhadharo, chero kupihwa mari, mabhonasi uye zororo rekurwara - zvakabhadharwa .. Ehe, bhonasi yemari inoenderana nemutero wemari. sezvo iri iri mariwo zvayo ...
Iko purogiramu yemabasa inoshanduka kune vakadzi vane pamuviri here?
Iyo purogiramu yebasa yevakadzi vane nhumbu inochinja here? Iwe unonyora kunyorera kweimwe-yenguva-yebasa vhiki kana zuva (iwe pachako unosarudza kuti yakawanda sei yaunoda kushanda :), uye mushandirwi haana kodzero yekuramba iwe! Labour Kodhi yeRussian Federation ...
Nhamba uye mubhadharo. Chii chakasiyana?
Rate uye muhoro. Ndeupi musiyano? Mubhadharo wenguva-wenguva unobhadharwa zvakaenzana nemaawa akashanda. Izvi zvinowanzo kuve 50% yemubhadharo. Mubhadharo - saizi yemubhadharo wakatarwa weimwe nguva yenguva, sekutonga ...
ndapota tsanangurirai unyanzvi. 125 TK RF uye Art. Xnumx
ndokumbirawo utsanangure Art. 125 yeLabhodhi Code yeRussian Federation uye Art. 115 pane chakadai chinhu - chirongwa chezororo. pamwe OK inotungamirirwa nazvo? maitiro ekubvumirana newaunoshandira, chinhu chikuru ndechekuti chikamu chekutanga chezororo chiri ...
Ndinofanira kutora nguva yakareba sei kubhadhara nguva yekurwara kubasa?
Nguva yekurwara iriko kubasa inofanira kupihwa? Iyo inishuwarenzi inogadza mabhenefiti ekusagona kwenguva pfupi kwekushanda, kwepamuviri nekubereka, mari yemwedzi yekuchengeta vana kwemazuva gumi kubva ...
Ndeupi musiyano pakati pechinyorwa pamwe nehurumende?
ndeupi musiyano uripo pakati pekomiti yemubatanidzwa nesangano revashandi? mubatanidzwa wevashandi isangano. trade union - hutungamiri hwesangano revashandi (sangano). komiti yemubatanidzwa haisi hutungamiri hwesangano revashandi. Iri ndiro repamusorosoro rekutanga rebazi revashandi mubatanidzwa pane chimwe chirimwa ...
Mutemo wekukanganisa pamakakatanwa emabasa.
Icho chirevo chekukanganisa kwemakakatanwa evashandi. Dai aishandiswa pachikumbiro. Izvo zvinodikanwa kunyorera kuhofisi yemuchuchisi.Iyo nguva yakatarwa yekuti mushandi aende kudare kunogadzirisa gakava revashandi yakatarwa muchikamu ...
ndezvipi zvinyorwa zvinoshandiswa nemushandirwi nekambani LLC pavanodzinga ivo pachavo
zvinyorwa zvipi izvo mushandirwi zvaanofanira kupa iyo kambani LLC pakubviswa kwake kwekuda kwake Anodiwa Christina! Chinyorwa 84.1 cheLabhodhi Code yeRussian Federation. Maitiro akajairika ekunyoreswa kumiswa kwechibvumirano chebasa Kubviswa kwechibvumirano chebasa ...
Munhu angashanda maawa mangani-nguva?
Maawa mangani munhu anofanirwa kushanda nguva-yenguva? Ndeipi mhedzisiro inogona kushandiswa kumushandi kana zvikazobuda kuti anoshanda munzvimbo dzinoverengeka nguva-yenguva, inopfuura hafu yezvakajairwa kwenzvimbo huru yebasa? ...
Ndeipi nzira yekugumisa kontrakta yebasa?
Ndeipi nzira yekupedzisa kondirakiti yebasa? muenzaniso wechibvumirano chebasa chechiremba chiremba anoshanda kwenguva pfupi chinodiwa Zvinoenderana neLabour Code yeRussia Federation, mushandirwi anosungirwa kugadzirisa hukama hwevashandi nemushandi nekunyora (chinyorwa ...
Ndingarega here kumhanya? Kana uine mwedzi we7 yakasara usati warega basa !!! Kana iwe uchikwanisa, chii chinoderedza?
Ndinogona here kuenda pamudyandigere? Kana kwasara mwedzi minomwe usati waenda pamudyandigere !!! Kana zvichikwanisika, chii chinobviswa? Chete muchiitiko chekuti iwe wakadzingwa nekuda kwekudzikiswa kwevashandi kana mu ...
Mutero wekubhadhara unobviswa kubva pakubhadhara kurwara here?
Mutero wemari unobviswa here kubva pakubhadhara zororo rekurwara? Zororo rekurwara - muripo kumunhu WEMAHARA kwenguva yekuremara kwake, kuitira kuti mutero ubatwe. Hongu. p. 1) Unyanzvi. 217 yeiyo Kodhi Yemutero yeRussian Federation Ngatitendeukire ...
Zvinokwanisika here kutumira chikwereti chekuwedzera basa?
Ndinogona here kuisa chiwedzero chebasa rekuwedzera? Chisungo 151. Mubhadharo wekusanganisa mabasa ekuita uye kuita basa remushandi asipo kwenguva pfupi _ 1. Chinyorwa 151 cheLabour Code chakafanana mune zvirimo ...
Chii chinonyanya kukosha yezera rezera rekuRussia.
Ndeapi mashoma emudhara-zera pension muRussia. pRegion yeRussia Minimum pension, mumaRubles / mwedzi Avhareji yepenjeni, mumaRubles / mwedzi MuRussia 6 354 10 890 12 4002014 2015 2014 XNUMX ...
chii chiri mushandi mukuderedza
chii chinokodzera kumushandi kana paine kushaya basa Iye mushandirwi paanobvisa chibvumirano chebasa nekuda kwekudzikiswa kwenhamba kana vashandi vevashandi kana kudzimwa kwesangano vanosungirwa kubhadhara mushandi: mibairo ye ...
Mari yekubhadhara yekudzidza. Mitemo, kuronga, kuverenga.
Kubhadhara zororo rekudzidza. Nguva, kurongeka, kuverenga. Mushandirwi anofanira kupa zvinonzi zororo rekudzidza kune vashandi vanodzidza vasipo kumayunivhesiti pachishandiswa gwaro rekufona rakapihwa nesangano redzidzo. Iyo fomu yesitifiketi yakadaro inogamuchirwa neOrder ye Ministry of Education ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,537 masekondi.